सिस्टेरियन मार्ग | यात्रा समाचार
त्यहाँ सडक र पथहरू, मार्गहरू छन् जुन हामीलाई सुन्दर परिदृश्यहरू मार्फत लैजान्छ र अरू जसले हामीलाई वास्तुकला र धर्मको इतिहासमा डुबाउँछन्। यो अन्तिम संयोजन भनेको के भनिन्छ प्रदान गर्दछ सिस्टेरियन मार्ग, केहि धेरै को यात्रा स्पेनको सुन्दर मठहरू.
यो धेरै लामो सडक होइन र साइकल चालकहरूले यसलाई गर्न छनौट गर्नु सामान्य कुरा हो तर स्पष्टतः तपाई यसलाई कार वा खुट्टामा पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको यातायात को साधन जुनसुकै भए पनि, तपाईले जान्नुपर्ने सबै कुरा यहाँ छ।
1 सिस्टेरियन अर्डर
2 सिस्टेरियन मार्ग
यो पनि भनिन्छ सिस्टेरियन अर्डर र यो धेरै पुरानो हो, होu जग १० 1098 to मा फिर्ता हुन्छ। कि वर्ष को लागि, बारेमा डिजोन, फ्रान्सजुन एक समयमा रोमी शहर थियो सिस्टेरियमरॉबर्ट डि मोलेमेस्ले एक अबी स्थापना गर्‍यो, अन्ततः अर्डरको उत्पत्ति।
यो १२ औं शताब्दीको महत्त्वपूर्ण क्रम थियो र फ्रान्सेली क्रान्तिको समयसम्म एक महान सामाजिक समारोह थियो। तर यसको संस्थापक मोलेमेस्स उपवास र गरीबी र धेरै साम्प्रदायिक कामका साथ साधारण भिक्षु जीवनमा फर्कन चाहन्थे, त्यसैले उनी एकान्त ठाउँमा पुगे र भिक्षुहरूको संख्यामा नयाँ अभ्यंग पत्ता लगाए। शुरुका दिनहरू सजिलो थिएनन् तर स्थानीय सज्जनहरूको सहयोगमा उनीहरू समृद्ध हुन सफल भए।
सिस्टरिसियन भिक्षुहरूले त्यस समयमा साधारण कच्चा ऊन बानी अपनाए, त्यसैले उनीहरूलाई बोलाउन थाल्यो "सेतो भिक्षु"। ११२१ देखि सहयोगी संस्थाहरूको जग र समुदायको बृद्धिसँगै नयाँ चरण शुरु हुने थियो। बाह्रौं र तेह्रौं शताब्दी यो heyday को हो।
यी सबै फ्रान्स मा भयो स्पेनमा त्यहाँ सिस्टेरियन अर्डरको दुईवटा मण्डलीहरू छन्, अरागोनको मण्डली र स्यान बर्नार्डो डे क्यास्टिलाको मण्डली। यो दोस्रो मण्डलीको सत्रहौं शताब्दीमा सुनको युग थियो र यसको 45 XNUMX वटा अभिलेखहरू थिए, जबकि अरागोनको आजसम्म तीन महिला र तीन पुरुष मठहरू छन्।
यो मार्गले तीन सिर्टेसियन अबीहरूलाई जोड्दछ: सान्ते क्रियसको मठ, एक सान्ता मारिया डे पोब्लेट र एक Vallbona डे लेस Monges, Lleida र तार्रागोना प्रान्तहरूमा। यो आदेश १२ औं शताब्दीभरि फैलियो र मुस्लिम हातमा नभएसम्म क्याटालुन्या नुवेवा भनिने भूमिहरूको क्राउन अफ अरागानले कब्जा गरेर स्पेनमा आइपुग्यो। अर्गोनी राजाहरूले सिस्टरसियन भिक्षुहरूलाई मठहरूको स्थापना गरेर भूमि पुनर्स्थापित गर्न आदेश दिए।
यस रंगीन मार्गमा पहिलो मठ हो सान्तेस क्राउसको मठ। यो १२ औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो र यो Aiguamurcia को नगरपालिका मा छ, तार्रागोनाको प्रान्तमा। यो शाही पैन्थेन घर हो त्यसैले समयको साथ यसले यसलाई ठूलो सुन्दरता प्रदान गरेको छ।
यो मठ हो कि आजसम्म कुनै मठमा जीवन छैन। अर्डरले यसलाई १ 1835 मा छोडे र १ 1921 २१ मा यो घोषणा गरियो राष्ट्रिय स्मारक। यस मठमा कम्प्लेक्सको तीन मुख्य भागहरूको संरचना छ: चर्च, यसको क्लिस्टर र चैप्टर हाउस। उपग्रहहरू पार्लर, रेफिक्टरी, सामान्य बेडरूम र भिक्षुहरूको कोठा हो। त्यहाँ एउटा कब्रिस्तान, एक इन्फर्मरी, कोठाहरू पनि छन् जहाँ सेवानिवृत्त भिक्षुहरू बस्थे, र शाही दरबार।
चर्च १२२1225 मा सम्पन्न भएको थियो र किल्ला जस्तो देखिन्छ। यसको नेभ has१ मिटर लामो छ जुन २२ मिटर चौडा र पर्खालहरू तीन मिटर बाक्लो छ। लेआउट तीन ल्याभको साथ एक ल्याटिन क्रसको आकारमा छ र छेउको चैपलहरू छन्। हामीले माथि भनेझैं, चर्चले शाही चिहानहरू राख्छ, अरागोनका राजा पेद्रो तृतीय र उनका वफादार एडमिरल र आरागोनका राजा जैमे द्वितीय आफ्नी श्रीमतीसँग। कलाको दुई बहुमूल्य कामहरू।
सिस्टेरियन मार्गमा दोस्रो चर्च त्यो हो सान्ता मारिया डे पोब्लेट, Vimbodí मा। यो पहिलोबाट kilometers० किलोमिटर भन्दा लामो छैन र पोब्ब्लेट जंगल र प्राडेस पर्वतहरूको फेदमा छ। यो मार्गमा तीन मठहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो र यो पनि अरागोनको क्राउनको पाँथ्यान थियो।
योसँग ठूलो महिमा, विस्तार र बृद्धि हुने समय पनि थियोयो १ 1835। मा छोडियो को एक परिणाम को रूप मा Mendizabal को जफत, एक प्रक्रिया जसमा विल्स र डोनेशनहरू र नगरपालिकाको फोहोर जमिनद्वारा संकलित धार्मिक आदेशहरूको सम्पत्तिहरू बिक्री समावेश थियो। यो सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको लागि पैसा प्राप्त गर्ने उद्देश्य भएका सम्पत्तिहरूको एक राज्य विनियोजन थियो, प्रत्यक्ष बिक्री द्वारा वा त्यसपछिको जमिनमा कामदार वा बुर्जुवालाई पुनर्विक्रय गरेर नयाँ कर लगाइनेछ।
भाग्यवस यो विहारले इतिहासलाई उल्टाउन सक्छ। यसको पुनर्निर्माण १ 1930 .० मा सुरू भयो र पाँच वर्ष पछि भिक्षुहरू फर्के। आज यो आंशिक रूपमा जनताको लागि खुला छ र हो विश्व सम्पदा युनेस्को द्वारा घोषित यसका चर्चहरू, यसका क्लिष्टहरू, सन्त जोर्डि र सान्ता क्याटेरिना चैपलहरू, शाही चिहानहरू र किंग मार्टेन एल ह्युमोनको दरबार सबैभन्दा मनोरन्जनात्मक ठाउँहरू छन्।
पछिल्लो क्याटलन गोथिक वास्तुकलाको रत्न मानिन्छ र आज यो मठको संग्रहालय पनि हो। यस विहारको क्षेत्रमा हामी भिम्बोडको वाइन संग्रहालय पनि हेर्न सक्छौं। त्यसो भए २ 25 किलोमिटर यात्रा गरेपछि हामी आइपुग्यौं Vallbona de les Monges को मठ। यो एक छ नन मठमलाई थाहा छ यो शहरको बीचमा नै छ।
यो Cistercian अर्डर को एक महिला मठ हो र छ राष्ट्रिय स्मारक '30s पछि। यो १२ औं र १ XNUMX औं शताब्दीको बीचमा निर्माण गरिएको थियो र यो धेरै जसो शैलीमा रोमान्सिक हो, यद्यपि यससँग गोथिकको पनि धेरै छ।
सन्‌ १ 1153 in मा ननहरूको एउटा समूहले बार्सिलोनाको काउन्टले दान गरेको जग्गामा सिस्टरसियन अर्डरमा सामेल हुने निर्णय गरे र चाँडै नै बडाहाकिमहरूले ठूलो सफलता पाए। १ XNUMX औं शताब्दीको गृहयुद्ध पछि भएका सम्झौताहरूले केही परिवर्तन ल्याए किनभने मठले आफ्ना छिमेकी जमिनहरू बेच्नुपर्दथ्यो ताकि किसानहरू बसोबास गर्न सक्थे (यी सम्झौताहरूले धार्मिक स्थानहरूमा टाढाका धार्मिक समुदायहरूको अस्तित्वलाई निषेध गरेको थियो), तर त्यो सुरूवात बिन्दु थियो। वर्तमान मठ को।
चर्च रोमान्स्कबाट गोथिकमा संक्रमणलाई चिन्ह लगाउँदछ र यसको गोथिक शैलीमा र एउटा विशाल र सुन्दर अष्टभुज घंटी टावर छ हंगेरीको रानी भिओलान्टेको चिहान, Aragon को Jaime I को पत्नी। तपाई रेफ्याक्टरी, भान्छा, पुस्तकालय, विभिन्न मठमा निर्भरता र स्क्रिप्टोरियम.
यो वास्तवमै सुन्दर छ। त्यहाँ निर्देशित भ्रमणहरू छन् त्यसैले मेरो सल्लाह यो छ कि तपाईं मठ वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस् क्यालेन्डरको लागि र समय यस बर्ष र अर्कोको लागि। र यदि तपाईं यहाँ सुत्न चाहनुहुन्छ भने यो सम्भव छ। त्यहाँ एक होस्टल छ जुन २० एकल वा डबल कोठा मोनास द्वारा चल्दछन्।
तीन स्थानहरू, उही मार्ग जुन इतिहास, वास्तुकला र धर्मको संयोजन गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » सिस्टेरियन मार्ग